Home News Shacabka Gobolka Banaadir oo Cabasho weeyn ka muujinaayo Ciidamo u gaar ah...
Shacabka Gobolka Banaadir oo Cabasho weeyn ka muujinaayo Ciidamo u gaar ah Gobolka!!
Bulshada ku nool 17 degmo ee gobolka banaadir ayaa cabasho xoog leh ka miijinayaan ciidamo gaar’u ah gobolka kuwaasi oo shacabka kula kaca falal qaadis canshuur aanan lagu shebin akoonada dowladda balse ku dhaca akoonada shaqsiyaadka ugu sareeya gobolka.
Waxay taasi keentay in shacabiga ku dhaqan muqdisho ay muujiyaan ineysan ku qanacsaneen inlagu tagrifalo oo wixii la rabo lagu sameeyo hantidoodii la baado iydoo la huwanyahay dharkii sareeynta sharciga oo aysana helin amniga kaafin kara.
Bulshada degta caasimada oo tiradoda ayka badantahay 3 milyan ayaa haatan waxaa la filayaa in maalmaha soo aadan ay sameeyaan bananbaxyo balaaran oo ayku doonayaan iney madaxda dalka ugu baaqaan in ibedel lagu sameeyo eng yariisoow iyo maamulkiisa kuwaasi oo ciidamo gaar’ah u sameystay baabi’inta shacabka.
Sikastaba ha ahaatee su’aasha taagan ayaa ah ‘’shacabkii caasimada hadii lagu tunto yaaloo talin doonaa’’ gudoomiye yariisow maamulka uu horkaco ayaa siweyn loogu eedeeyaa lunsashada lacagaha canshuuraha iyo iney cidamo gaar’ah u sameeysteen laaynta shacabka.
Previous articleDarawal Waday Gaari Meeyd Siday oo lagu dilay Muqdisho!!
Next articleDowladda Soomaaliya oo lagu Eedeeyay in aysan Waxba ka qaban Balanqaadyadii ay Horay u sameeysay!!
Wararar dheeraad ah oo ka soo baxaya Dagaal dhexmaray Al-shabaab iyo...
Gurigii Kheyre oo lagu kala Cararay iyo Kooxdii Xildhibaanada ahaa ee...